ကိုဘယ်လိုမှအလျင်အမြန်အောင်ကျွမ်းမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူ-ပစ်ကပ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ - ဗီဒီယိုချက်တင်-အချစ်အွန်လိုင်း!
ကောက်-အနုပညာရှင်နှင့်နည်းပြနဲ့ညှို့မှအပစ်ကပ်မဟာမိတ်သုံးသိပ္ပံကိရိယာတခုအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကူညီဖို့လူတွေပိုပြီးပျော်ရွှင်အတွက်၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝနှင့်အချစ်ဆက်ဆံရေး။ တကယ်တော့၊ဒါကြောင့်ရိုးရှင်းပြီးပထမဦးဆုံးမျက်မှောက်မှာ၊ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အတွက်ဆွေးနွေးမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူတက်ရှိရာအမှတ်ကအတော်လေးစိတ်ဝင်စားသင်ပြောပြရန် အကြောင်းပိုမိုသူမသို့မဟုတ်သူ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသက်တာ။ တကယ်တော့၊သင်စတင်တဲ့စကားဖိတ်ခေါ်ခြင်းအားဖြင့်မိန်းကလေးအဆိုက၊အားကြီးသောအခွင့်ပါဘူးတဝက်-လမ်း။ ဒီကောင်လေးဆောင်တတ်၏ဤမျှလောက်လူအဖို့သူသည်အနိုင်ကန်အမှန်အောင်ငါ့ကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းငှါငါ့ကိုအရာခပ်သိမ်းကိုငါလိုအပ်ပါတယ်။ မတည်သင်ပိုမိုသောအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်:သူမ၏ဘဝ၊လူမှုရေး၊ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့၊နိုင်မှကောင်းလိုက်လျောညီထွေဖြစ်သင်သည်သင်၏ဂိမ်း၏အသှေး။ လည်း၊ကျွန်တော်ခင်ကြီးပေါ်တွင်နောက်ကျောသွားကြဖို့အဘယ်သို့ငါပြောနှင့်အစမှာ၊သင်သည်အဘယ်သို့ပြုပါရန်ရှိသည်မပြုမီသင်ဖိတ်ခေါ်မယ့်မိန်းကလေးတစ်ပြောဆို၏၊ငါငါ့အားပြောပြရန်၊တစ်ဦးဇာတ်လမ်းဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြောင်းမကြာသေးမီကငါ့ထံသို့သို့မဟုတ်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က၊ခံစားချက်ကကျွန်မအတွေ့အကြုံသို့မဟုတ်ငါခံစားရမှာအချိန်၊နှင့်အဖြစ်မကြာပြီးစကားပြော၊ငါဖိတ်ခေါ်မိန်းကလေးမှပိတ်ထားသည်၊ ထိုအခါငါဆက်ငါ့ပုံပြင်များအထိဖွင့်လှစ်စကားဝိုင်းနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံချင်သး။ လျှောက်ထားပြောခဲ့တာ သင်မြင်ရပါလိမ့်မည်သောသူတယောက်အချိန်ပြီးနောက်၏အကျိုးစီးပွားလိုင်းလဲလှယ်လိမ့်မည်။ အဖြစ်တိုးတက်မှု၏စကားနှင့်သင်တို့အဘို့အကောင်းသောအဘိုးပြတ်သည်၊သင်၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုမြင်သောအကျိုးစီးပွားမှမနှုတ်ဘာသာစကားနှင့်နှုတ်ဖြင့်မိန်းကလေး၏။ ဥပမာအားဖြင့်၊အမိန်းကလေးတစ်ဦးလိုစကားဝိုင်းသို့မဟုတ်မျှဝေချင်ပါတယ်၊မိမိအတွေ့အကြုံနှင့်ခံစားချက်များကိုနှင့်ပတ်သက်သငျသညျအဘယျသို့ပွောဆိုရန်ရှိသည်သူ့ကိုရန်၊အမှတ်အသားပြောင်ပြောင်တင်းတင်းများအမည်ဖြင့်၎င်းအကျိုးစီးပွား။ သင်ကြဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းပြသသောမိန်းကလေးသင်ကကောင်လေးများမှာအစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်အဘယ်ကရရှိနိုငျသခင်သည်စိတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်စကားဝိုင်းနှင့်ပိုမိုသင်သည်ပြောပြပါ။ ငါကြိုက်တတ်တဲ့အလေးအနက်ဖော်ပြဖို့စဉ်းစားသူများကလိုအပ်သည်ဟောပြောဖို့တည်းအတွက်ငါးမိနစ်ပြီးတော့အလွန်လက်မှမိန်းကလေး။ ဒါဟာဘာလဲလိုပံု၏အဆင့်တစ်ဦး၏ပါဝင်ပတ်သက်မိန်းကလေးသင်တွေ့ဆုံသည့်အခါပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့နှင့်ရချင်ကျွမ်းနှင့်အတူ ။အပြည့်အဝကိုမြင်ရရာ၊ကျွန်တော်စိတ်ကူးကြည့်လို့ရတယ်အကြောင်းအရာများ၏စကားတွင်"သင်"ႏွင့္"သူမ"အဖြစ်ဘာသာရပ်များ၏စကားဝိုင်းများ၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်၊နှင့်အခြားအကြောင်းအရာ၏စကားဝိုင်းအတွက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူဤစကားပြောဆိုသည့်အကြောင်းအရာ၊ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာ၏စကားမှာအနိမ့်အဆင့်။
နှင့်အတူကြောင့်အဆိုပါဘာသာရပ်၏ခရီးသွား၊မယ့်အစားအကြောင်းပြောနေတာအတွက်ခရီးသွားတစ်ဦးပြည့်စုံသောနည်းလမ်းမှကြိုက်တတ်တဲ့အစားအကြောင်းပြောဆိုရာတွင်ဆက်သွယ်မှုအတူသင်သို့မဟုတ်သူမ၏။ ငါသွားဖို့အပြဇာတ်လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်က၏။ ဒါဟာကစားသတင်း။ ထိုပုံစံမျိုးနှင့်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ အဘယ်အမှတ်အများဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ထားတဲ့အတွက်သရုပ်ဆောင်တွေရောက်လာဖို့သို့အရအရေပြား၏ဇာတ်ကောင်ဒါကြောင့်အလျင်အမြန်။ ကဒါရိုးရှင်းသော။ မှတပါး၊ငါသည်အစဉ်အမြဲကိုယ်ကိုယ်ကပြောသည်တစျနေ့ကငါသွားသောပြဇာတ်ရုံ၊စီမံခန့်ခွဲဖို့ကျွန်မစိတ်ဖိစီးမှု၊အမြန်ငါ၏စိတ်ခံစားမှု၊နှင့်အနိုင်ရသူတို့ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှု။ သတိရ၊ထိုကွောငျ့၊ဤဘာသာရပ်များ၏အနိမ့်အဆင့်နှင့်အဆင့်မြင့်အတည်းနှင့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း ပြုထို့ကြောင့်ဤအသုံးအချက်များ သင်၏ဦးနှောက်ထဲမှာအရေးယူသို့သွင်းထားမှာသင်၏နောက်အစည်းအဝေး၊ကျွမ်းရမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူ၊ချန်နှင့်အတူသူမ၏အရေအတွက်(တစ်ခါတစ်ရံတွင်အိပ်နှင့်အတူ)၊ပြီးထို့နောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အများကြီးပိုရိုးရှင်းသော။ ကောက်-အနုပညာရှင်နှင့်နည်းပြနဲ့ညှို့မှအပစ်ကပ်မဟာမိတ်သုံးသိပ္ပံကိရိယာတခုအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကူညီဖို့လူတွေပိုပြီးပျော်ရွှင်အတွက်၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝနှင့်အချစ်ဆက်ဆံရေး။.
ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ မိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူမရှိဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗီဒီယိုနိဒါန်း ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့မိန်းကလေးများ တိုက်ရိုက်လိင်ချိန်းတွေ့ တစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးအလိုကိုဖြည့်ဆည်းဖို့သင် ချက်တင်ကစားတဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းမိန်းကလေးများ ၁၈ မိန်းကလေးများ အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဓါတ္ပံုချိန်းတွေ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း